Ambongadiny asidra malemy cation resin mpanamboatra sy mpamatsy | Dongli
Resina miiba asidra malemy
Resins Rafitra Matrix Polymer Fisehoana endrika ara-batana asavondrona Ionic teny Meq / ml Total H ny totalin'ny Exchange Exchange Votoatin'ny hamandoana Haben'ny potika MG mamontsinaH → Na Max. Lanjana fandefasana g / L
GC113 Gel karazana Polyacrylic miaraka amin'ny DVB Manadio vakana boribory R-COOH H 4.0 44-53% 0.3-1.2 45-65% 750
MC113 Macroporous Polyacrylic DVB Vakana Opaque Mamando R-COOH H 4.2 45-52% 0.3-1.2 45-65% 750
D152 Macroporous Polyacrylic DVB Vakana Opaque Mamando R-COOH N / A 2.0 60-70% 0.3-1.2 50-55% 770
Ny resina fifanakalozana asidra malemy dia karazana resina misy vondrona fifanakalozana asidra malemy: carboxyl COOH, phosphate po2h2 ary phenol.
Ampiasaina amin'ny fitsaboana rano, fisarahana singa tsy fahita firy, fifanekena sy fanalefahana rano, fitrandrahana ary fisarahana antibiotika sy asidra amine amin'ny indostrian'ny fanafody.
(1) Ny resina fifanakalozana asidra malemy dia manana toetra mitovy amin'ny rano. Noho izany, ny fahaizany mamoaka sira tsy miandany dia malemy (izany hoe sarotra ny mamaly amin'ny sira misy anion-asidra mahery toa ny SO42 -, Cl -). Izy io dia tsy afaka mamaly afa-tsy amin'ny sira asidra malemy (sira misy alkalinity) hamokatra asidra malemy fa tsy asidra mahery. Ny rano misy alkality avo dia azo tsaboina amin'ny asidra malemy H-karazana fifanakalozana resin. Aorian'ny fanesorana tanteraka ny cations mifandraika amin'ny alkalinity amin'ny rano, ny cations mifandraika amin'ny asidra mahery radical ao anaty rano dia azo esorina amin'ny resina fifanakalozana asidra mahery H.
(2) Satria ny resina fifanakalozana asidra malemy dia manana firaiketam-po ambony amin'ny H +, dia mora ny mamerina azy, noho izany dia azo averina miverina miaraka amin'ny ranon-tsiran'ny resin-kaody mahery mifangaro H-type.
(3) Ny haben'ny fifanakalozana resina fifanakalozana asidra malemy dia lehibe kokoa noho ny an'ny resina fifanakalozana asidra mahery.
(4) Ny resina fifanakalozana asidra malemy dia manana diplaoma marindrano ambany sy pores lehibe, ka ny herin'ny mekanika dia ambany noho ny an'ny resina fifanakalozana asidra mahery.
Toetra mampiavaka azy hafa
Ny toetra mampiavaka ny resina mifangaro asidra malemy ao anaty rano dia mitovy amin'ny an'ny asidra malemy. Izy io dia malemy fifandraisana amin'ny sira tsy miandany (toy ny SO42 -, Cl - ary ny anion asidra mahery). Izy io dia tsy afaka mihetsika afa-tsy amin'ny sira asidra malemy (sira misy alkalinity) ary mamokatra asidra malemy aorian'ny fanehoan-kevitra. Ny rano misy alkality avo dia azo tsaboina amin'ny resina fifanakalozana ion-type mahery H. Aorian'ny fanesorana ny anion mifandraika amin'ny alkalinity ao anaty rano, ny anion mifandraika amin'ny radical asidra mahery dia azo esorina amin'ny resina fifanakalozana ion-type H mahery.
Satria ny resina asidra malemy dia manana firaiketam-po ambony amin'ny H, mora ny mamerina azy, noho izany dia azo averina miverina amin'ny alàlan'ny ranon-javatra maloto resin'ny fifandimbiasan'ny karazana H mahery.
Ny fahaizan'ny resina asidra asidra malemy dia manodidina ny in-droa amin'ny resina asidra mahery. Satria ambany ny diplaoma misy ny resina asidra asidra malemy, ny herin'ny mekanika dia ambany noho ny an'ny resina asidra mahery.
Ny resina asidra malemy karazana sira dia manana fahaizana hydrolisis.
Teo aloha: Resy fifanakalozana base anion mahery
Manaraka: Resina fifanakalozana asidra mahery